C/XAKIIN IYO MAXAMUD (MUNIIROW) MALAHA INA CADIB DIFAACIMAYSAN EE WAAD CEEBEYNAYSAAN | Toggaherer's Blog
« ANIGOO AH MUWAADIN U DHASHAY JSL WAXAAN DOONAYAA IN AAN WAX KA CADEEYO ARIMAHA JAALIYADA NORWAY
HADAANAN HADAANAN, HADAANAN GADOODKA, LIXLOOW GU’GA MAANTA, LA SOO HADHIN GUUSHA!!!…….. »
C/XAKIIN IYO MAXAMUD (MUNIIROW) MALAHA INA CADIB DIFAACIMAYSAN EE WAAD CEEBEYNAYSAAN
Cabdixakiin iyo Maxamuud(Munirow) Malaha Ina Cadib difaacimeysan ee Waad Ceebeynaysaan.
Marka hore Salaanta Islaamka ka dib, nabad geliyo iyo naxariisi nabegeenii (CWS) korkiisa ha ahaato. Aniga ah nin ka mida dadka degan Dalka Norway gaar ahaan magaalada Drammen oo wax yar u jirta caasimada Oslo, aadna xogogaal ugu ah sheekada Jaaliyada Somaliland ayaa waxaa la yaab igu noqotey, markii aan arkey laban oo si bilaa khajilaad ah ama hubsiimo la`aana ugu jawaabey,. Ninka la yidhaa Cisman Cumar Dool oo ka mida dadka degan magaalada Oslo.
Labada nin ayaa waxey iska daba mareen in Mr. Dool uu ka cadheysan yahey Mukhaayada Jaaliyada!!!. Hadaba ugu horeyn aan isku dayo in dadka warmoogta ah aan fahamsiiyo Mukhyaadan Jaaliyada ee la sheegayo.
Mukhyaada _Jaaliyadu sid uu qofkastaa oo aan aragi sawiran karo waa mukhyaad ku dhex taala hoolka u kireysan Jaaliyada. Mukhyaada waxaa dhaqankeedu ahaa in laga kireeyo qof xubin ka ah Jaaliyada dhalasho ahaana ka soo jeeda Somaliland. Qofkaasi waxa uu bixin jirey kiro ay ka qaadan maamulka Jaaliyadu, waxaana xaaraan maqdaca aheyd in Mukhyaada uu hungureeyo nin xil ka soo qabtey jaaliyada Norway waa marka laga reebo ninka imika gudoomiyaha ka ah Jaaliyada oo isagu dani iyo mulkiilaba ka ah Jaaliyada.
Hadaba waa sidee sheekadan la leeyay Dool baa ka cadheysan sideyse wax u dhaceen.
Markii uu la wareegay Ina Aadan Cadib Jaaliyada Oslo waxaa mukhyaada haystey ninka la yidhaa Ina Xaaji Oktoober. Waxaa markaa dhacdey in Xuseen Aadan Cadib uu damcey inuu isagu la wareego Mukhyaada Jaaliyada Somaliland., ka dib waxaa madaxa isla galey isaga iyo Ina Xaaji Oktoober. Halkaa marka ay sheekadu mareyso wuxuu Ina Cadib cabasho ula tagey Ardaaga uu ka dhashey Ina Xaaji Oktoober isagoo u sheegey in aanu meeshii maamuli karin inta uu Ina Oktoober Mukhayaada haysto. Waxaa markaa uu rayil caamkii ka dhaadhiciyey in Ina Xaaji Oktober uu yahey nin meesha baabinaya. Waxaana Ina Xaaji Oktober loo xukumey in loo celiyo lacag uu Jaaliyada ku lahaa oo gaadheysay 130,000 oo Karonka Norway ah.
Halkaa marka ay mareyso waxaa dhacdey in Dool oo ah nin Ganacsade ah oo rabey inuu mukhyaada qabsado uu ina Cadib u sheegey inuu jecel yahey inuu meesha la yeesho, isagoo weliba ka dhaadhiciyey in sharciga jaaliyadu u yaala aanu diidi karin in nin Gudoomiye ah uu mukhyaada wax ku yeesho waa sida laga soo xigtey Doole . Dool oo markaa eegayay maslaxadiisa ayaa arintii yeelay waxaana Cadib si bilaa sharci ah daaqada uga tuurey Ina Xaaji Oktoober.
Shurkaadaas oo socotey mudo dhawr bilooda ka dib waxaa dhacdey in Dool iyo Cadib ay isku dhaceen(Laba baadil ku heshiisay xaqa ayey ku coloobaan), iyagoo isku qabtey faa`iidadii ka soo baxasey mukhayaada. Waxaa markaa Ina Cadib oo ceeb suuqa la mari kara la oo ay ku qaraxdey inuu noqdey nin khiyaameeyay dadkii doortey uu ku cararey Ciidagale weyne oo uu ku yidhi Ina Cumar Dool iga qabta, Ciidagalena waxa ay Ina Cumar Dool ka codsadeen in aanu sheekada u geyn dadka kale ee loo dhameeyo si hoose si ninkaa ceebtiisa loo asturo. Is jiidjiidad dheer ka dib waxaa Cismaan Cumar la kala dooran siiyey 2 qodob.
1. Inuu Mukhyada la wareego oo lacagtii Ina Cadiba ka gashey uu u celiyo
2. Inuu isagu lacagta badhkiisii qaato oo faryaro bidix ka baxo.
Inkasta oo dadkii reer Norway ay arintaa aad uga cadhoodeen diidana in si tuugo ah loo asturo ninkaa dadka khiyaameyay, hadana Ina Dool oo ka fikirayey sucmadiisa iyo inuu ka fogaado in Jaaliyda reer Somaliland ee Oslo ay khilaafkaas ku xidhanto waxa uu door bidey inuu lacagtiisii qaato waxaana arintaa imika laga jooga mudo hal sano ah.
Horta anigu sida aan filayo Dool cadhadii uu cadhoon waayey maalintaa maanta filimaayo iney ku dhalan karto waayo, wax uu ka cadhoodaba ma yaalaan oo meeshiiba waa meel madow oo 10 nin ay dubnad ku ciyaaraan.
Hadaba nimankan is leh Ina Cadib difaaca malaha iyagaa la cola oo doonaya in sheekada Oslo oo qudhi ay ogtahey ay gaadhsiiyaan rayil caamka kale oo dhan.
Waxaa iyadanu xusid mudan in laga hadlo ninka afsomaliga kala fogfog soo qorey ee magaciisa ku sheegay Cabdi xakiin uu yidhi Kuuriya markii uu gudoomiyaha ahaa waxaa loo ururiyay 80,000kr, Sicid mohamed Amina wey ku xidhantey markiisii. Horta ninkaa waxaa haboon inuu soo barto sida wax loo qoro iyo milagaha hadlka loo taxo. Ragii dhici jirey dhib kuma ahee dhawaan baradkow ha dheeliman. Weliba sidaa uu sheegey waa runtii oo labada nin ma kala xigeen lakiin malaha in mijineed ayuu hadlaya isagu.
Inkastoo hadii sheekada rag kale lagu soo dardaro aan wax faaiido ah laga gaadheyn hadana karaamada Jaaliyada, Isku xidhaanta dadka reer Somaliland ee degan Norway, iyo wax u qabadka umada meesha deganiba waxa uu jirey markii ay ragaa hore meesha haysteen. Maanta waxaa markhaati ah dadka Norway degan in looga yaacey ninkaa dadka khiyaameyay.
Calaa kuli xaal Dool ama cadho ha hayso ama yaaney haynine wax xila oo cidi u dhiibatey ma jirto,waxaase hawli iyo wareer ka taagan yahey Gudoomiyaha mudidii ka dhamaaneyso, ee hadhowna odhan doona 130,000 ayaan Jaaliyada ku leeyay. Markaas ayuu war joogaa.
Aadan Faarah Ali
This entry was posted on May 6, 2009 at 12:29 pm and is filed under 1.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.